प्रहरी नै असुरक्षित ! – Sajha Bisaunee
प्रहरी नै असुरक्षित !
। २० भाद्र २०७५, बुधबार १२:४७ मा प्रकाशित
‘आफै असुरक्षित भएर नागरिकलाई सुरक्षा कसरी दिने ?’
सुर्खेत, १९ भदौ ।
ईट्टाले बारेको दुई कोठे कच्ची टहरो । खिया लागिसकेको टिनको छानोलाई ढुङ्गा र टायरले च्यापेर अड्याइएको छ । कतिखेर हावा लाग्छ र छानो नै उडाएर लैजान्छ पत्तो छैन । छियाछिया भइसकेको टिनको छानोले न घाम छेक्छ न पानी । झट्ट हेर्दा यो कुनै कार्यालय जस्तो नै लाग्दैन । तर यो प्रहरी चौकी बड्डिचौरको कार्यालय हो । विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि यही अस्थायी टहरोबाट प्रहरीचौकी बड्डिचौरले सेवा दिइरहेको छ ।
वि.सं. २०६४ सालबाट बड्डिचौरमा प्रहरीचौकी राखिएको हो । कर्णाली राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले बनाएको अस्थायी टहरोबाट सेवा दिँदै आएको प्रहरीचौकीले हालसम्म पनि स्थायी भवन पाउन सकेको छैन । १६ वर्ष पहिले निर्माण गरिएको उक्त अस्थायी भवन जीर्ण बन्दै गएको छ । नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारीसहित खटिएका प्रहरी आफ्नै पक्की भवन नहुँदा असुरक्षित बनेका छन् ।
बजार क्षेत्रको प्रवेशद्वारमा रहेको जीर्ण भवनबाट प्रहरीले बराहताल गाउँपालिकाका कुनाथरी, पोखरीकाँडा, लेखगाउँसहित ६ वडामा सुरक्षा दिँदै आएको छ । कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी भित्रिने सवारी साधनको आवागमनको निरीक्षण पनि गर्ने गरेको छ । तर, भवन जीर्ण हुँदा प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन चुनौती बनेको छ । ‘कार्यालयको छाना जीर्ण हुँदा वर्षात्मा पानीले कोठा नै हिलाम्य हुन्छ’ प्रहरी नायव निरीक्षक कृष्णप्रसाद कँडेलले भने, ‘घामलाग्दा गर्मीले सुत्न सकिदैन । हिउँदमा छानोले शीत समेत छेक्दैन ।’ दुई कोठे भवन जीर्ण भएपछि चौकीमा कार्यरत प्रहरीलाई बस्न समस्या भएको छ ।
चौकीले जनशक्ति अभाव र भौतिक संरचनाको अभाव विगतदेखि नै झेल्दै आएको निरीक्षक कँडेलले
बताए । त्यही जीर्ण भवनका दुई कोठामध्ये एउटा कोठामा जनसम्पर्क कक्ष र अर्को कोठामा भान्सा र सुत्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘भान्सा र सुत्ने कोठामा पानी परेपछि जलमग्न हुन्छ’ निरीक्षक कँडेलले भने, ‘सुरक्षामा खटिने प्रहरी नै सुरक्षित छैनन् भने कसरी शान्ति सुरक्षा दिन सकिन्छ ?’ १० जनाको दरबन्दी रहेको चौकीमा हाल आठ जना कार्यरत छन् । चौकीका लागि पर्याप्त सवारी साधनसमेत छैनन् । एउटा मोटरसाइकलसमेत पटक–पटक बिग्रिने गरेको छ । मर्मत गरेरै मोटरसाइकल सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।
संघीय सरकारले आन्तरिक कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सहयोग नगर्दा प्रहरीहरू असुरक्षित भएर सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले समेत चौकीको मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउनतर्फ ध्यान दिन नसकेको गुनासो उनको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बावियाचौरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुशोभन श्रेष्ठले
समुदायको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले इलाकामार्फत् जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भवन मर्मतका लागि जानकारी दिने बताए । यता बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले प्रहरीचौकीको भवन मर्मतका लागि गाउँ सभाबाट बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले समग्र गाउँपालिकामा भवन मर्मतका लागि ७५ हजार रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको उनले बताए । ‘प्रहरीचौकी बड्डिचौर र अस्थायी प्रहरीचौकी तरङ्गामा समस्यै समस्या छन्’ उनले भने, ‘जसमा गाउँपालिकाले आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गर्ने तयारी थालेको छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार जिल्लामा जिप्रकासहित इलाका र अस्थायी गरी ४० वटा प्रहरी युनिटहरू छन् । ‘राज्यले नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिए अनुसार नै जिल्लामा प्रहरी इकाईहरू राखिएको छ’ डीएसपी श्यामसिंह चौधरीले भने, ‘जिल्लामा अधिकांश चौकीहरूको अवस्था दयनीय नै छ । कतै भाडाका भरमा पनि प्रहरीचौकी बसेका छन् ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रहरी गठन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय सुर्खेत भवन निर्माणका लागि पाँच करोड, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत भवन निर्माणका लागि पाँच करोड, जिल्ला÷इलाका प्रहरी र प्रहरीचौकीका भवन निर्माणका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।